Queensland waa gobol ka mid ah 7 gobol ee dalka Australia. Caasimada gobolka Queesland waa magaalada Brisbane. Queensland (oo loo soo gaabiyo Qld) waa gobolka labaad ee ugu weyn iyo tan saddexaad ee ugu badan ee ku yaal Commonwealth of Australia. Waxaa ku yaal woqooyi-bari dalka, waxaa ku xayiran Northern Territory, South Australia iyo New South Wales galbeedka, koonfur galbeed iyo koonfurta. Dhinaca bari, Queensland waxaa xuduud la leh Badweynta Carbeed iyo Badweynta Pacific. Woqooyiguna waa Torres Strait, oo leh Papua New Guinea oo ku taal meel ka yar 200 kiilomitir oo ka mida dhul-waynaha. Gobolka ayaa ah midka lixaad ee dunida ugu weyn, oo leh degaan ah 1,852,642 kilomitir kilomitir (715,309 sq mi).
Laga soo bilaabo May 15, 2018, Queensland waxay leedahay dad ka kooban 5,000,000, waxay ku badan yihiin xeebaha iyo gaar ahaan Koonfurta Bari ee gobolka. Magaalada caasimada ah iyo magaalada ugu weyn ee gobolka waa Brisbane, oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn Australia. Inta badan loo yaqaan "Sunshine State", Queensland waxay ku taalaa 10 meelood oo ka mid ah 30 magaalo ee ugu weyn Australia, waana dhaqaalaha saddexaad ee ugu weyn wadanka. Dalxiis ee gobolka, ayaa si weyn u kiciyay jawiga kulaylaha diiran, waa warshad weyn.
Queensland waxaa markii hore degan Aboriginal Australian iyo Torres Strait Islanders. Yurubta ugu horreysa ee ku taala Queensland (iyo Australia) waxay ahayd gawaarida Dutch Willem Janszoon ee 1606, kaas oo sahamiyey xeebta galbeed ee jasiiradda yaryar ee u dhow magaalada Weipa. Sanadkii 1770-kii, James Cook Cook wuxuu sheegay in xeebta bari ee Australia ay tahay Boqortooyada Ingiriiska. Goobta New South Wales waxaa la aasaasay 1788 by Gudoomiyaha Gobolka Arthur Phillip ee Sydney; New South Wales wakhtigaas ayaa waxaa ku jiray dhamaanba waxa hadda yihiin Queensland, Victoria iyo Tasmania. Queensland waxaa la baadigoobayay sanadihii dambe ilaa laga bilaabo markii la aasaasay gumeysi ciqaab ah oo ku yaal Brisbane 1824-kii by John Oxley. Gaadiidka ciqaabta ayaa istaagay 1839kii iyo degitaan bilaash ah ayaa la ogolaaday laga bilaabo 1842.
Gobolka ayaa loo magacaabay sharaf ka mid ah Queen Victoria, oo ah 6-kii Juun 1859 saxiixay Warqad Lacageed oo ka soo jeeda gobolka New South Wales. Maalinta Queensland waxaa lagu dabaaldegaa sanad kasta gobolka 6-da June. Queensland waxay ahayd mid ka mid ah lixda deegaan ee ku soo biiray dowladihii aasaasay ee Australiya 1 January 1901
↑ From Historic Hospital to Unique Kingdom Hall
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Queensland&oldid=220935"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Oktoobar 2021, marka ee eheed 15:23.